DOORKA GANACSIGA EE BULSHADA – USE24 GLOBAL MANAGEMENT COSULTANT
DOORKA GANACSIGA EE BULSHADA
Maqaalku wuxuu dib u eegis ku sameynayaa arrimaha ugu waaweyn ee la xiriira goobta iyo doorka ururada marka laga hadlayo mas’uuliyadda bulshada ee bulshada ka saaran maanta. Waxaa sidoo kale feejignaan la saaraa aragtidooda bulsheed ee ku wajahan shaqaalaha shirkadaha, kooxo gaar ah oo dad ah, ama bulshada guud ahaan.
Erayada muhiimka ah: ganacsiga, bulshada, masuuliyada bulshada, taageerada
Fikradda doorka bulsho ee ganacsigu waxaa la saaray diiradda 50-meeyadii qarnigii labaatanaad . Tani waxay qayb ahaan sabab u ahayd horumarinta iskaashiga u dhexeeya ganacsiga iyo dawladaha dalalka warshadaha intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka iyo markii dambe, sanadihii “Dagaalkii Qaboobaa”. Muddadan, waxaa la dhisay Guddiga Horumarinta Dhaqaalaha, oo ay ku jiraan wakiillada ugu caansan ganacsiga adduunka. Ujeedada ugu weyn ee Guddigu waxay ahayd inuu dowladaha kala taliyo arrimaha dhaqaalaha iyo ganacsiga. Muhiimaddeeda, si kastaba ha noqotee, waxay noqotay mid lama huraan ah, maxaa yeelay sidan oo kale waxay gacan ka geysatay fidinta ka-qaybgalka ganacsiga adduunka ee wax ka qabashada arrimaha bulshada iyo siyaasadda dawladda. Waxa kale oo ay ahayd 50-meeyadii qarnigii labaatanaad markii shaqadii ugu horaysay ee dhammaystiran ee mawduuca ka muuqatay , oo uu qoray Howard Bowen. Buugga, wuxuu kaga hadlay fikradda mas’uuliyadda bulshada ee lagu dabaqi karo ganacsiga. Ku baraarujinta ujeeddooyinka ballaaran ee bulshada ee geeddi-socodka ah
go’aan qaadashada ganacsigu waxay bulshada u keeni kartaa faa’iidooyin bulsho iyo dhaqaale. Doodda ku saabsan doorka ganacsigu ku leeyahay bulshada waxaa kiciyay dhacdooyinkii dhacay 1960s iyo 1970s. Jacoby  wuxuu ku doodayaa in mucaarad aad u daran uu ku soo baxo fikirka dadweynaha ee ka dhanka ah ganacsiga adduunka. Qeybaha kala duwan ee bulshada xiisaha nool ayaa ka soo ifbaxaya dhibaatooyinka sida xuquuqda madaniga, dagaalada, sinaanta haweenka, wasakheynta warshadaha deegaanka iyo xaalada hareeraheena guud ahaan, iyo sidoo kale sharciyada ku saabsan ilaalinta xuquuqda macaamilka. J.F. Kennedy sanadku markuu ahaa 1962. Intii lagu guda jiray sanadihii 1970-naadkii iyo 1980-yadii qarnigii XX, bartamaha dareenka waxaa ka jira dhibaatooyinka la xiriira hub ka dhigista, ka faa’iideysiga awooda nukliyeerka, ka badbaadinta dadka ku nool dunida saddexaad gaajada.
ІІ XILALKA SHARCIGA IYO BULSHADA EE URURKA
Rajooyinka bulshada ee xagga ganacsiga ayaa isbaddelay sannadihii la soo dhaafay, isbadaladan ayaa iyana keenaya isbeddelo ku yimaada aragtida bulshada ee ku saabsan doorka ganacsiga. Tan ugu muhiimsan geeddi-socodka qiimeynta bulshada ayaa ah in la kala saaro inta u dhexeysa mas’uuliyadda sharciga iyo bulshada ee ururada. Mas’uuliyadda sharciga waxaa loola jeedaa dhowrista sharciyada gobolka iyo qawaaniinta sharciga quseeya ee la xiriira ganacsi gaar ah oo qeexaya waxa ururka loo oggol yahay ama aan loo oggoleyn inay sameyso. Ururku wuxuu u dhaqmayaa si waafaqsan dhammaan shuruudaha sharciga ah wuxuu ganacsigiisa ugu shaqeeyaa qaab sharci ahaan mas’uul ka ah, laakiin tani macnaheedu maahan inay iyadu masuul ka tahay bulsho sidoo kale. Mas’uuliyadda bulshada, oo ka soo horjeedda mas’uuliyadda sharciga, waxay tusineysaa heer cayiman oo jawaab iskaa ah dhibaatooyinka bulshada ee bulshada.
Doodaha ku saabsan doorka iyo ka soo horjeedka mas’uuliyadda bulshada.
Murannada ku saabsan doorka ganacsigu ku leeyahay bulshada ayaa dhaliyay doodo badan oo lagu taageerayo laguna diidan yahay mas’uuliyadda ka saaran bulshada .
A) Doodaha taageeraya masuuliyada bulshada
1. Aragtida koritaanka muddada-dheer ee u habboon ganacsiga. Hawlaha bulshada ee shirkad hagaajisa heerka nolosha bulshada deegaanka ama baabi’isa baahida gobolka sharciyeynta sidoo kale waxay noqon kartaa danteeda gaarka ah waxayna gacan ka geysan kartaa xasiloonida shirkadda ee bulshada. Intaas waxaa sii dheer, gunooyinka bulshada ee la cabiri karo waxay, mustaqbalka fog, kicin karaan horumarka iyo kobaca faa’iidada, maadaama macaamiisha, alaab-qeybiyeyaasha, iyo bulshada maxalliga ahi, ay u abuuri karaan muuqaal soo jiidasho leh ururka.
2. Bedelida baahiyaha iyo rajooyinka iibsadayaasha. Rajooyinka bulshada ee laxiriira ganacsiga ayaa si isdaba joog ah isu beddelaya. Si loo yareeyo farqiga u dhexeeya rajooyinka cusub iyo jawaabta dhabta ah ee shirkadaha, ka qayb qaadashadooda xallinta arrimaha bulshada ayaa noqota hawl muhiim ah oo lama huraan ah.
3. Helitaanka ilaha loogu talagalay bixinta gargaarka ee xallinta arrimaha bulshada. Asal ahaan, ganacsigu wuxuu leeyahay awooddiisa aadanaha iyo maaliyadeed waxaana la filayaa inuu ka dhigo qayb ka mid ah kuwan loogu talagalay in loogu isticmaalo ujeeddooyin bulsheed.
4. Waajibaadka anshaxa ee ku dhaqanka dabeecadda bulshada. Shirkaddu waa xubin bulshada ka mid ah sidaa darteedna waa inay u hoggaansantaa qawaaniinta anshaxa ee xakameysa dhaqankeeda. Si kale haddii loo dhigo, shirkaddu, sida shaqsi kasta oo bulshada ka mid ah, waa inay ku dhaqantaa hab bulsheed masuuliyad leh oo ay gacan ka gaysataa xoojinta mabaadi’da anshaxa ee bulshada. Intaas waxaa sii dheer, qawaaniintu mar walba kuma filna inay xal u keenaan kiis kasta, ururkuna waa inuu u dhaqmaa si mas’uuliyad leh si uu u ilaaliyo kala dambeynta bulshada iyo inuu xiriir wanaagsan ka dhex sameeyo xubnaheeda.
B) Doodaha ka dhanka ah masuuliyada bulshada
1. Ku xadgudubka mabda’a macaashka ugu badan. Qeybta kheyraadka loo qoondeeyay baahiyaha bulshada waxay saameyn ku yeelaneysaa gaaritaanka faa’iidada ugu badan. Shirkaddu waxay ku dadaashaa inay wax ka qabato mid masuul ka ah arrimaha bulshada, laakiin ugu horreyntii waxay diiradda saareysaa sidii loo gaari lahaa danaheeda dhaqaale, iyadoo arrimaha bulshada looga tagayo hay’adaha iyo hay’adaha dowliga ah si wax looga qabto.
2. Kharashaadka tabarucaada bulshada. Lacagtaan waxaa xukuma mas’uuliyiinta dowladda laakiin ugu dambeyn waxay ka tarjumaysaa macaamiisha qaab qiimahoodu sarreeyo.
3. daah furnaan la’aanta howlaha shaqo ee shacabka. Badanaa maareeyayaasha shirkaduhu waxay ku fashilmaan inay ogaadaan inay si xadidan ula xisaabtamayaan dadweynaha, qaar ka mid ah wareegyadeeda. Nidaamka dhaqaale ee suuqa wuxuu si wanaagsan u xakameynayaa tilmaamayaasha dhaqaale ee istaagga iyo waxqabadka shirkadda ee suuqa laakiin si liidata ayuu u xakameeyaa mas’uuliyadda bulshada ka saaran bulshada guud ahaan ama kooxaha bulshada gaar ahaan. Halkan waxa ugu muhiimsani waa doorka bulshada iyo ururadeeda ee dejinta mabaadi’da anshaxa iyo waajibaadka iyo ka-qaybgalka mas’uuliyiinta dawladda iyo ganacsiyada hawlaha bulshada qaarkood
haddii kale u arkaa mid aan khusayn iyo tixgelin, adigoon wax masuuliyad ah ka saarin dadweynaha.
4. Aqoon ama xirfado aan ku filnayn xallinta arrimaha bulshada. Shirkad kasta shaqaalaheeda guud ahaan waxay si wanaagsan ugu diyaarsan yihiin inay ka shaqeeyaan arrimaha dhaqaalaha, suuqgeynta iyo tikniyoolajiyadda. Si kastaba ha noqotee, waxay leeyihiin khibrad u oggolaaneysa iyaga inay gacan ka geystaan ​​xal u helista arrimaha bulshada ee khuseeya xubnaha shaqaalaha laftooda iyo guud ahaan bulshada. Marka la eego, hagaajinta heerka mas’uuliyadda bulshada waxay u baahan tahay bulshada inay soo saarto khubaro, markii lagu magacaabo xilalka dowladeed ama ururada samafalka, awood u yeelan doona inay ka shaqeeyaan xallinta dhibaatooyinka dhinacyada bulshada
ІІІ. KU-DHAQANKA WANAAGSAN EE MAS’UULIYADDA BULSHADA
Daraasadaha ay sameeyeen qoraayo ajaanib ah oo ku saabsan maareynta shirkadda ee ku saabsan mas’uuliyadda bulshada ee shirkadda ayaa muujineysa isbeddel wanaagsan oo ku aaddan mas’uuliyadda kor loo qaaday. Maamulayaasha kaqaybqaatay cilmibaarista waxay rumeysan yihiin in cadaadiska kordhinta mas’uuliyada bulshada ee ganacsiga uu yahay mid dhab ah, oo muhiimad weyn leh, uuna sii wadi doono isbeddelkiisa kor u kaca. Daraasado kale ayaa tilmaamaya in wakiillada maareeyayaasha shirkaddu ay ku lug leeyihiin shaqada NGO-yo kala duwan iyo jirkooda ka shaqeeya arrimaha mas’uuliyadda bulshada ka saaran bulshada.
Caqabadaha ugu badan ee hortaagan soo saarida barnaamijyada laxiriira masuuliyada bulshada waxaa kamid ah dalabaadka ay soojeediyaan shaqaalaha (maamulayaasha iyo shaqaalaha) shirkada si loo kordhiyo dakhligooda (mushaaraadka). Hamiga kororka degdegga ah ee macaashka iyo dakhliga ayaa ku qasbaya maamulka shirkadda inay ka fogaadaan qoondaynta qayb ka mid ah ilaha shirkadda ee barnaamijyada diiradda lagu saaray mas’uuliyadda bulshada ee bulshada.
1) Barnaamijyada horumarinta heerka waxbarashada
Si loo taageero dhiirrigelinta dadka si ay u sii wadaan hagaajinta waxbarashadooda, shirkadaha ayaa laga yaabaa inay u qaybiyaan kaalmooyin loogu talagalay tababar dheeraad ah iyo dib-u-qalmaynta hay’ado waxbarasho oo kala duwan. Sidaas oo kale kaalmo dheeraad ah ayaa la siiyaa ururada tababarka ee shaqadooda koowaad ay tahay inay siiyaan waxbarasho tayo leh ardaydooda.
2) Barnaamijyada kabida ee isbitaalada iyo xarumaha dhaqanka
Nidaamka barnaamijkan dhexdiisa, ururku wuxuu saxiixaa heshiisyo laba geesood ah oo lala galo isbitaalada si loogu sameeyo baaritaan caafimaad oo dhameystiran ee shaqaalaha iyo baaritaanno dheeri ah sida loogu baahdo. Meesha suurtagalnimada noocaas ahi jirto, shirkaddu waxay u qoondeysaa lacag si ay u taageerto horumarinta dhaqanka, yacni kabida shaqada fanaaniinta, abaabulka bandhigyada, iwm.
3) Barnaamijka adeegyada bulshada
Wadamada horumaray xaga dhaqaalaha (IBM – USA) shirkaduhu waxay caawiyaan ururada aan dowliga ahayn waxayna taageeraan shaqaalahooda howl gabka ah . Waxaa intaa dheer, maamulka shirkaddu wuxuu si buuxda u bixiyaa dhammaan kharashyadooda nololeed. Tani waa ficil wanaagsan oo waqtigaan la isticmaali karo illaa xad.
4) Barnaamijka taageerada jaamacadda
Ujeeddada barnaamijkani waa in la bixiyo (joogto ah) taageerada tacliinta sare iyadoo la soo iibsanaayo (la siinayo) qalab tiknoolajiyad casri ah, iyadoo la siinayo deeqo waxbarasho sannadle ah ardayda iyo aqoonyahannada heer sare ah, iyadoo la siinayo taageero dhaqaale macallimiinta jaamacadda si kor loogu qaado aqoontooda machadyada iyo ururada hoggaaminaya. Shaqaalaynta macallimiin si ay u qabtaan koorsooyin cusbooneysiin iyo takhasusyo. Soo bandhigida shuruudaha ka faa’iideysiga shaqaalaynta dhalinyarada jaamacadaha ka qalin jabisay. U dirista carruurta naafada ah inay wax ka bartaan xarumaha jaamacadaha ee gaarka ah.
5) Lacagaha taageera ururada gobolka
Shirkadaha ayaa laga yaabaa inay hirgeliyaan barnaamijyo lagu taageerayo ururada adeegyada u siiya shaqaalahooda. Shirkaddu waxay aasaasi kartaa sanduuq si ay uga caawiso kor u qaadista isticmaalka adeegyada ay bixiyaan ururadan iyo qaar ka mid ah ilaha agab ee shirkadda. Sanduuqa noocan ah waxaa loo isticmaali karaa taageero wanaagsan oo loogu talagalay waxbarashada (xanaanooyinka iyo xanaanooyinka, iskuulada xirfadaha iyo jaamacadaha).
6) Sanduuq lagu caawinayo tababbarka dadka naafada ah Ujeedada sanduuqa waa in taageero maaliyadeed la siiyo kooxaha dadka naafada ah si looga caawiyo tababarkooda oo ka dhaca xarumaha tababarka. Waxay sidoo kale bixin kartaa gargaar maaddi ah, sida iibinta kombuyuutarrada, si ay gacan uga geysato soo bandhigida teknoolojiyada IT-ga ee waxbarashada.
IV. MAQAALKA IYO MAAMULKA KU-MEEL GAARKA AH
Caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan masuuliyada bulshada ayaa ah tayada shaqsiyadeed ee xubnaha ururka iyo aragtida ay ka qabaan sax iyo qalad. Shakhsiyaadka rumeysan in “ururku leeyahay inuu kordhiyo faa’iidada iyadoo la raacayo qawaaniinta sharciga ah” waxay tixgelinayaan faa’iidada, waxtarka iyo u hoggaansanaanta sharciyada inay yihiin muhiimadda koowaad iyo inay qiime aan ku filnayn ku saaraan altruism-ka. Waxay rumeysan yihiin in urur si wanaagsan loo maamulo oo bulsho ahaan masuul ka yahay illaa iyo inta ay hawlahoodu raacaan qiyamka qaarkood. Si loo awoodo in la sameeyo xulashada saxda ah ee dabeecadda shaqsi waa in marka hore lagu barto fikradda anshaxa. Anshaxa waxaa lagu dhisay wax sugan
mabaadi’da ku saleysan fikradda dhaqanka saxda ah iyo midka qaldan. Anshaxa ganacsiga kuma xirna kaliya fikradda dhaqanka bulshada ka mas’uul ah. Waxay ka kooban tahay go’aanno badan oo xagga dabeecadda ah oo loogu talagalay maareeyayaasha iyo shaqaalaha labadaba. Maamulayaasha hay’addu waa inay ku dhaqmaan go’aan qaadasho firfircoon iyagoo ixtiraamaya isku dheelitirka lagama maarmaanka ah ee u dhexeeya danaha ganacsi ee ururka iyo xaddidaadda habdhaqanka, oo ay u arkaan mid aan bulshadu aqbali karin . Dhibaatooyinka ganacsi ee anshaxa waxay la xiriiraan isku dhaca  ama si ka yar heerka suurtagalnimada isku dhaca noocaas ah, ee u dhexeeya waxqabadka maaliyadeed ee ururka, dakhliyada, kharashyada iyo faa’iidada iyo waxqabadka mas’uuliyadda bulshada, oo lagu muujiyey waajibaadka ururka ku wajahan xubnaheeda iyo bulshada. Habka casriga ah ee lagu kordhinayo waxqabadka mas’uuliyadda bulshada ayaa ah in lagu tababaro maareeyayaasha ururka iyo shaqaalaha kale ee mas’uulka ka ah sida loo maareeyo arrimaha anshaxa ee ay kala kulmaan howl maalmeedkooda. Anshaxa sidoo kale waxaa lagu baran karaa jaamacadaha sidaa darteed waxay abuureysaa faham bilow ah oo ku saabsan arimaheeda la xiriira. Ururradu waxay qaadayaan tallaabooyin iyo go’aanno kala duwan, sida fadhiyo tababarro gaar ah, oo lagu sameynayo xeerarka anshaxa ee maamulayaasha iyo shaqaalahooda.
Qawaaniinta anshax ee ururku waxay matalayaan nidaam lagu wadaago qiyam iyo xeerar anshax, oo ay tahay inuu u fiirsado shaqaale kasta. Ujeeddadooda ayaa ah in la sharaxo himilooyinka ururka, si loo abuuro jawi anshax caafimaad leh iyo in la go’aamiyo tilmaamaha anshaxa ee go’aan qaadashada. Maamulka IBM wuxuu sheegayaa in shirkadu ka fileyso shaqaale kasta xaalad kasta inay ku dhaqaaqdo si waafaqsan heerarka ganacsiga.
Anshaxa ganacsiga ayaa muhiimad weyn ugu leh xiriirka caalamiga sidoo kale. Way iska cadahay, inta ay danahooda ka shaqeynayaan, shirkadaha dalal badan inay sidoo kale tixgeliyaan doorkooda dhexdhexaadiyeyaasha isweydaarsiga horumarinta dhaqaalaha iyo bulshada. Maaddaama shirkadaha noocan oo kale ah ay u muuqdaan inay saameyn joogto ah ku yeelanayaan dhinacyada ay la macaamilayaan inta lagu guda jiro howlahooda ganacsi, arrimaha anshaxa waa inay noqdaan qayb muhiim ah oo ka mid ah qorshaha guud ee ururkooda.
Heerarka anshaxa way ku kala duwan yihiin waddamada kala duwan. Anshaxa ma leh “xadka ugu badan”. Shirkadaha caalamiga ah waxay sida caadiga ah yeelan doonaan urur casriyeysan oo ka shaqeeya howlaha wax soo saarka iyo, xaaladaha intooda badan, heer sare oo anshaxeed iyo xakameyn. Diirada ururada ee dhanka anshaxa ayaa la filayaa
ku kordha kororka hantida dhaqaale ee shaqaalaheeda iyo bulshada.
V. TALOOYIN GUUD (KHUDBADO KOOBAN)
Waqtigan xaadirka ah, fikrad ayaa laga abuurayaa oo laga qaatay dalkeenna (iyo waddamadii ka jiray xeradii hantiwadaagga ee hore) in ururradu ay u qoondeeyaan qayb ka mid ah ilaha dhaqaalahooda iyo dadaallada lagu taageerayo bulshooyinka maxalliga ah ee ay ka shaqeeyaan, iyo bulshada guud ahaan. Sida uu tilmaamay Lee Preston in , “Urur si mas’uuliyad leh uma shaqeyn karo muddo dheer inta uu khilaaf ka dhexeeyo deegaankiisa.” Si loo guuleysto, ururku waa inuu awood u yeeshaa inuu la qabsado kana jawaabo dhibaatooyinka ka dhasha deegaanka bulshada si jawigan looga dhigo mid u roon ururka. Kharashka mas’uuliyadda bulshada waxaa sidoo kale qiil u leh xaqiiqda ah inay gacan ka geysaneyso hagaajinta qeybaha kala duwan ee bulshada, iyo sidoo kale hagaajinta aragtida bulshada ee shirkadda. Tani waa in lala xiriiriyaa macaamiisha sare ee daacad u ah soosaarayaasha waxsoosaarka sidaas awgeedna waxay horseedi kartaa hagaajinta guud ee xaaladda bulshada
Waqtigan xaadirka ah, fikrad ayaa laga abuurayaa oo laga qaatay dalkeenna (iyo waddamadii ka jiray xeradii hantiwadaagga ee hore) in ururradu ay u qoondeeyaan qayb ka mid ah ilaha dhaqaalahooda iyo dadaallada lagu taageerayo bulshooyinka maxalliga ah ee ay ka shaqeeyaan, iyo bulshada guud ahaan. Sida uu tilmaamay Lee Preston in , “Urur si mas’uuliyad leh uma shaqeyn karo muddo dheer inta uu khilaaf ka dhexeeyo deegaankiisa.” Si loo guuleysto, ururku waa inuu awood u yeeshaa inuu la qabsado kana jawaabo dhibaatooyinka ka dhasha deegaanka bulshada si jawigan looga dhigo mid u roon ururka. Kharashka mas’uuliyadda bulshada waxaa sidoo kale qiil u leh xaqiiqda ah inay gacan ka geysaneyso hagaajinta qeybaha kala duwan ee bulshada, iyo sidoo kale hagaajinta aragtida bulshada ee shirkadda. Tani waa in lala xiriiriyaa macaamiisha sare ee daacad u ah soosaarayaasha waxsoosaarka sidaas awgeedna waxay horseedi kartaa hagaajinta guud ee xaaladda bulshada.
Dhaqanka wanaagsan ee la soo bandhigay ma khuseeyo dhaqanka bulshada ee ururada waaweyn. Dhamaan ganacsiyada yaryar iyo ururada kale sida iskuulada, jaamacadaha iyo isbitaalada, waxay mas’uul ka yihiin bulshada.
Hase yeeshe, waa in la ogaadaa, in ujeedada ugu weyn ee shirkad warshadeed ay tahay in la sugo mushaharka shaqaalaha ka shaqeeya shaqadooda, ka dib oo keliya ka-qaybgalka dhibaatooyinka bulshada. Haddii aysan awoodin inay ganacsi ku sameyso macaash, su’aasha mas’uuliyadda bulshada ayaa weli ugu horreyn ku jirta dareenka tacliinta.
Si kastaba ha noqotee, urur waa inuu fuliyaa arrimahiisa si uu ula jaan qaado rajooyinka dadweynaha. Si kale haddii loo dhigo, mas’uuliyadda bulshada ee shirkaddu waxay ka dhigan tahay wax ka badan samafalka oo keliya. Caadi ahaan, ururku wuxuu u dhaqmaa si masuuliyad leh oo waafaqsan tixgelinta iyo rajada dadweynaha guud.
Gebogabadii, eraybixinta soo socota ee bayaan ku xusan buugga  waa lagu sharixi karaa: “Maamulka shirkaddu waxaa ku waajib ah inay adeegsadaan dhammaan kartidooda si ay u gaaraan macaashka iyo kororka ugu sarreeya. Laakiin danta gaarka ah ee iftiinka leh ee shirkaddu waxay u baahan tahay inay fuliso wax kasta rajada macquulka ah ee bulshada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ay khuseyso.
gacanta ku haynta ula dhaqanka cadaalad ah ee shaqaalaha, macaamiisha heerarka kala duwan, iyo bulshada deegaanka.
1. Waxaa jira laba qodob oo muhiim ah oo laga qabo mas’uuliyadda bulshada. Marka loo eego midka ugu horreeya – urur ayaa mas’uul ka ah bulsho ahaan illaa iyo inta ay kordhinayso faa’iidada saamileyda iyada oo si adag loo ilaalinayo qaab-dhismeedka sharciga ee dalka. Marka loo eego aragtida labaad – halka maamulka hay’addu ay tahay inay si waafi ah uga falceliyaan xaaladda dhaqaale ee dalka, waa inay sidoo kale ilaaliyaan oo ay mas’uul ka noqdaan saamaynta bani’aadamnimo iyo bulsheed ee ganacsiga ururadu ku leeyihiin shaqaalaha, macaamiisha iyo bulshada beelaha. Labada aragtiyoodba waxay isku raacsan yihiin in ururku saamayn togan ku yeesho bulshada.
2. Mas’uuliyadda sharciga, oo ka duwan tan bulshada, waxay u baahan tahay u hoggaansanaanta sharciyada iyo qawaaniinta gaarka ah, kuwaas oo tilmaamaya waxqabadyada ay qaban karto ama qaban karto ururku. Mas’uuliyadda bulshada, dhinaca kale, waa ilaa heer cayiman falcelin iskaa ah dhacdooyinka bulshada gaarka ah.
3. Waxaa jira tiro ka mid ah Pro iyo Con ee masuuliyada bulshada.
4. Ururo gaar ah ayaa horumariyay oo fulinaya barnaamijyada mas’uuliyadda bulshada.
5. Manаgers waxay adeegsanayaan dhowr barnaamijyo iyo habab, iyo waliba tusaalayaal loogu talagalay akhlaaqda anshaxa si loo wanaajiyo heerarka anshaxa ee ururadooda. 6. Ururadu waxay qaadi karaan tillaabooyin dhowr ah si ay u kiciyaan anshaxa shaqaalaha.